Zvese nezve simba rekutenga | Ehupfumi Zvemari
Claudi casals | 14/10/2021 09:56 | Yakagadziridzwa ku 15/10/2021 18:49 | General hupfumi
Tsanangudzo yakanangana nezvazviri kana tichitaura nezve simba rekutenga iri hukama pakati pekugona uye huwandu hwekutenga izvo munhu anogona kuita neimwe huwandu hwemari. Nhasi, pfungwa yesimba rekutenga inotora kukosha kwakakosha. Chikonzero chikuru ndiko kuwedzera kwakawanda kwemitengo, iyo inowanzoenderana nemitengo yemutengi indices, iyo CPI, kana inflation.
Chinhu chinonakidza ndechekuti kunzwisisa kuti chii chinonzi simba rekutenga uye kuti rinoshanda sei, tinogona kutora matanho ekuti riwedzere. Zviripachena, sezvo iine hukama, muhoro uri nani unobatsira kuve nesimba rakakura rekutenga. Asi haina kukosha. Chaizvoizvo, uye nekuedza, senge zvese, chero munhu anogona kutora matanho ekuwedzera nekuvandudza mamiriro avo mune izvi. Kuti tiite izvi, isu tichaisa iyi chinyorwa kunzwisisiro iri nani yesimba rekutenga kuti ikubatsire kuita sarudzo iwe uye nekudaro ukwanise kuwedzera.
1 Chii chinonzi simba rekutenga?
1.1 Sezvo kuyerwa?
1.2 Mienzaniso yesimba rekutenga
2 Nzira uye nzira dzekuwedzera simba rekutenga
2.1 Semuenzaniso maitiro ekuchengetedza kana kuwedzera simba rekutenga
Chii chinonzi simba rekutenga?
Simba rekutenga rinotariswa neuwandu hwezvinhu nemasevhisi anogona kutengwa nemari yakapihwa. Izvi zviri kuratidza mutengo weumwe neumwe wavo. Pfungwa iyi yakanangana nekukosha kwemari. Nekudaro, nekufamba kwenguva, mitengo inowanzochinja, kazhinji zvichikwira, zvichiita zvigadzirwa kudhura. Ichi chiitiko chinogoneka nekuda kwekudzikira zvishoma nezvishoma kwemari.
Kugona kuongorora kuti zvinokanganisa sei mutengo wehupenyu, indekisi yemutengi inofungidzirwa. Iyi indekisi kurema kunosanganisira seti yemitengo pazvinhu nemasevhisi ayo vatengi vanowanzo tenga kazhinji. Nenzira iyi, kuyerwa kunoitwa kunogona kufananidzwa nechero kwakatorwa kare uye kunogona kuona kuwedzera kana kuderera kwemitengo. Nekuda kwechiyero ichi, simba rekutenga revatengi rinogona kutsanangurwa.
Mienzaniso yesimba rekutenga
Panogona kuve nezviitiko zviviri umo simba rekutenga rinogona kuchinja nekufamba kwenguva. Mune chimwe chazvo ndechekuti inoderera, zvinova zvinonyanya kuitika, kana kuti zvinowedzera, izvo zvinomboitika.
Kuderera. Inogona kunge iri nekuda kwezvinhu zviviri. Asi zvakadaro kukwira kwemitengo yezvigadzirwa, kudzikira kwemari, kana zvese zviri zviviri. Kuti tinzwisise zvirinani kuti zvinhu zviviri zvinokanganisa sei, ngatifungei zvinotevera mamiriro. Ngatimbofungidzirai kuti munhu ane muhoro we1.200 600 euros pamwedzi anoda kutenga zvigadzirwa kubva kuchitoro chebazi. Yese mari iyoyo inodhura mazana matanhatu emaeuro. Chekupedzisira, mushure memwedzi mishoma zvigadzirwa zvakafanana zvinodhura mazana masere euros, asi zvakadaro muhoro wake hauna kuchinja uye unoramba uri pa800 euros. Izvo zvaitika ndezvekuti ave nekurasikirwa kwesimba rake rekutenga, uye zvakare zvine mutsindo. Muchiitiko chekutanga, aive nemari chaiyo yakasara yekutenga zvigadzirwa zvese zvakare. Mune yechipiri kesi, iwe unenge uine zvakakwana kutenga chete 1.200%.
Wedzera. Kupesana nenyaya yakapfuura, kuwedzera kwesimba rekutenga kunogona kunge kuri nekuda kwe zvakachipa zvigadzirwa kana kuongororwazve kwemari. Icho chokwadi chekuti zvigadzirwa zvinogona kudhura zvakanyanya kana zvishoma, kupfuura kukosha kwemari, kazhinji zvinokonzerwa nekupa uye kudiwa. Chikumbiro chakakura chinokonzeresa kuwedzera kwemitengo, uye kupihwa kukuru kuchaita kuti vadzike. Nekudaro, mune ino mamiriro, iye munhu ane mubhadharo we1.200 euros akashandisa mazana euros, aigona kuona kuti mumwedzi mishoma zvigadzirwa zvakafanana zvinodhura mazana mana emaeuro.
Nzira uye nzira dzekuwedzera simba rekutenga
Kuti uwedzere kana kuchengetedza simba rekutenga, iro rakakoshawo, ndizvo kuburikidza nekutora nekudyara. Iyo yekudyara inogona kuve ese ari maviri mumabhizimusi ayo anopesana nemutengo shanduko, masheya, fungidziro ine mbishi zvigadzirwa, zvisungo, nezvimwe. Iko kutora kunogona kuve zvese mukati real estate kana zvinhu zvine tsika yekukoshesa nekufamba kwenguva kana kuchengetedza kukosha kwayo.
Ngatitii inflation inowanzo simudza avhareji ye2%. Kana tikachengeta mari nenzira yekuchengetedza mubhangi pasina kuishandisa, taizoona kurasikirwa kwesimba rekutenga rakaenzana nekuwedzera kweCPI. Pane kupokana, kana zvivakwa zvaiwanzo kukwira mumutengo wakaenzana neCPI, semuenzaniso, hatingavone simba rekutenga richiderera. Neichi chikonzero, zvakakosha kuchengetedza simba rekutenga, kana mune ino kesi, kuchengetedza kwakatorwa kubva muhoro.
Zvisinei, hazvisi nyore nguva dzose kana kuwanikwa kune wese munhu kuwana real estate, uye kune izvi tinogona kuwana zvimwe zvigadzirwa, zvisina kuchengetedzeka zvakaenzana uye zvisina njodzi, senge musika wemasheya. Tinogona kuwana inflation-yakabatana zvisungo, inozivikanwa seMAZANO, kana masheya. Makambani mazhinji anogona kudzikisira purofiti yavo kana vatengi vavo vakatambura kurasikirwa kwesimba rekutenga. Zvinowanzo taurwa kuti masheya anopesana ne inflation semuenzaniso, uye hachisi chokwadi, zvirinani kwete zvese kana munguva pfupi. Nekudaro, zvimwe zvekudya zvevatengi senge chikafu zvinogona kufamba zvirinani zviitiko izvi. Chaizvoizvo nekuti vanhu havamire kudya.
Semuenzaniso maitiro ekuchengetedza kana kuwedzera simba rekutenga
Iye zvino tiri kurarama a inflationary hupfumi nharaunda nekuda kwedambudziko remagetsi. Kushaikwa kwemagetsi uye kuwedzera kwakawanda kwezvinhu zvisina kugadzirwa mitengo kuri kukwira mitengo yevatengi. Kwete chete vanhu vanoona zvainoita, makambani akati wandei akamisa kugadzirwa kwavo uye vamwe vanoonekwa kana vanomanikidzwa kuwedzera mutengo wezvigadzirwa zvavo. Muenzaniso, uya wekudya. Zano rekugona kuchengetedza simba rekutenga nhasi raizove ongorora makambani akatsaurirwa kudyiwa kwechikafu. Sezvatakambotaura, ivo vanowanzo simira kumatambudziko, neimwe nzira nekuti vanhu havasi kuzomira kushandisa.
Iko kupi kwekudyara mumusika wemasheya
Iko kuwedzera kana kuderera kwesimba rekutenga zvakajairika uye zvinowanzoitika. Chero bedzi isina kunyanyisa uye inogona kudzorwa, pane nzira dzekusarasikirwa nayo. Kutsvaga muhoro uri nani, basa riri nani, kuisa mari, kana kutenga, zvinogona kubatsira kuchengetedza simba rekutenga iro rinoitirwa kuchengetedza nenzira yekuchengetedza.
Ndinovimba wakwanisa kuwana mhinduro kusahadzika kwaungave uine nezve kutenga simba. Uye rangarira, sarudzo dzese dzinofanirwa kuongororwa uye zvichienderana nemamiriro ako ega. Hapana mienzaniso kana maonero (kusanganisira aya ari pane ino blog) anofanirwa kutorwa sekurudziro. Remangwana harina chokwadi, uye mamiriro anogona kunge akasiyana kana shanduko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Simba rekutenga
David Carr anogadzirisa nyaya iyi paanenge achikurukura mibairo. Zvichakadaro, ivo vanoumba chikamu chakakura chehuwandu hwezvinodiwa. Pasina mibairo yakanaka hapana chinogadziriswa chinodiwa. Uye pasina kudiwa kuoneka kudzikira.
Asi Carr haateveri mutsetse weKeynes wevatengi nekuti anovavarira zvakanyanya kubazi rinogadzira. Iko kukura kwemubhadharo zvakare kuri kudiwa kuri kukura, kupihwa mhinduro yakasununguka.
Izvo zvingave zviri kuwedzera zvepfungwa chinhu - moyo kana moyo - weThalers kune iyo polynomial Consumption + kuchengetedza + mitero + bhizimusi chiyero. Uyezve, kana kuchengetedza kukosheswa, hapana mari dzinobudirira.